BEERTA LAGA BILAABO GURIGA: ABUUR, IWM - SOOSAARKA DALAGGA
Cuncuninta Begonias - wax kasta oo ka socda A ilaa Z
Laga yaabe, in beeralayda ubaxa badan, hooyooyinka iyo awoowayaashu waxay ku koraan begonias guriga dhexdiisa. Ubax Tani waxay dhalatay ubucda mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha thanks to ubaxyada beeh caleen qurux badan iyo daryeel fudud.
Sidee u kortaa barashada guriga?
Waxaa lagu dhex beeri karaa dhul caalami ah, sida gaar ah shuruudaha ciidda. Warshadani waa mid fudud, laakiin qorraxda tooska ah ayaa waxyeello u leh (marka laga reebo dhowr nooc oo gaar ah).
Ku rid ubaxa meel bannaan, laakiin aan ku jirin qorraxda dhalaalaya, daaqadaha koonfur-galbeed iyo koonfur-bari waa kuwo ku habboon.
Begonias ayaa loo baahan yahay celceliska qoyaanka hawada (50% ama wax yar ka sarreeya), laakiin biyaha waa in aan loo oggolaan inay ku dhacaan caleemaha, sidaas darteed laguma talinayo in lagu buufiyo dhalada buufin. Waraabinta warshadda waa inay noqotaa laba jeer toddobaadkii, laakiin ha badin - boodhka ayaa waxyeeleynaya xididada wuxuuna abuuri karaa jawi bacrin ah horumarinta fangaska waxyeellada leh.
Sidee loola tacaali karaa guriga?
Waxaa lagu faafiyaa qaybo ka mid ah tuber, abuurka, guntooda caleemaha ama afkoda, iyo sidoo kale qaybo ka mid ah caleen.
Habonesyada taranta ee Begonia:
Ku dhufo of begonias leh miraha at home. Waxaad u baahan doontaa abuurka miraha, weel balaastig ah si aad uga saartid carrada iibsatay (si loo ciribtiro khatarta cayayaanka) iyo filim caag ah (ama boorso). Inta lagu jiro xilliga qaboobaha, kala bixi abuurka dhulka dushiisa oo ku buufin foorno leh buufin.
Ha ku aasin miraha dhulka - way ku filan karaan.
Ku dabool weelka dhalada leh caag iyo meel diiran (qiyaastii 24 darajo), meel fiican oo iftiin leh. Maalin kasta waxay u baahan tahay in la buufiyo, waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah inay maalin walba hawo qaadato - fur furka saacad iyo badh. Labo toddobaad ka dib, abuurku waa inuu soo baxaa. Marka caleemo dhowr ah ay ka muuqdaan sprouts, iyaga ku samee yar yar (50 ml) koob, iyo bil kadib - muraayado waaweyn (100 ml).
Beeridda caleemaha curonias. Qaado caleen cusub oo caafimaad leh. Laga soo bilaabo dhinaca dambe, ka dhig qaybaha badan ee xididdada. Ku dhaji xaashida dhinaca dambe ee dhulka oo si khafiif ah ugu cadaadee dhagaxyo yaryar ama waxyaabo kale oo fudud. Daboolka ku dabool warqad caag ah iyo meel meel diiran oo kulul.
Dhulka dushiisa waa inuu noqdaa mid qoyan, waxaa fiican in laysku buufiyo buufinta biyaha oo lagu daro daroogada-biostimulator.
Dhowaan caleenta ayaa siin doona xididada, iyo 2-3 toddobaad kadib sprouts ayaa soo baxaya. Marka fuuqyada ay ku saabsantahay mitir cabbir dhexdhexaad ah, si taxadar leh uga saar qeybaha maqaarka "hooyada" iyo si taxadar leh u faafiso "carruurta" muraayadaha yaryar.
Burburinta caleemaha curonia ee biyaha. Iska yaree caleen caafimaad qab leh Lugta gaaban oo ku rid galaas biyo diiran. Ku dhaji galaas meel diiran adoo adeegsanaya iftiin kala duwan oo si joogto ah u beddel biyaha. Waxaa lagu talinayaa in la gooyo kiniin kobcin leh oo biyo ah si looga hortago kalluunka caleenta. Waqti ka dib, xaashidu waxay siin doontaa xididada. Marka ay gaaraan 2-3 cm dheer, beerta xaashida si aad u hesho saddex meelood meel oo ka mid ah dhulka hoostiisa.
Isku-dhafintu waa hab dhakhso ah oo sahlan oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay rooting begonias. Waxay u ogolaataa beeritaanka warshad iyada oo aan wax ka badalin sifooyinka noocyada kala duwan.
Sidee loo gooyaa curonia? Goynta ayaa la jarayaa - qayb ka mid ah astaam caafimaad leh oo ku saabsan 10 sentimitir dheer.
On gacanta waa inuu ahaado caleemo yar iyo ugu yaraan 2-3 burooyinkeeda.
Kadibna qoyan biyo, ka dibna "Kornevinom" Si aad u dardar geliso sida muuqaalka ah ee xididdada iyo meydka ah ee ciidda qoyan 1-2 centimeters. Ka dib markaa, dheriga waxaa lagu daboolayaa weel balaastig ah ama weel dhalaalaya si aaney u taabanin jarista. Maalin kasta waa lagama maarmaan furan 1-2 saacadoodiyo marka caleemaha cusub soo baxaan, weel ama weel waa la saaraa kadibna waxaa lagu daryeelaa ubax sida caadiga ah.
Ma suurtagal in la gooyo curonia xilligii dayrta? Dabcan, waqtiga ugu fiican waa muddada xilli firfircoon, taas oo ah, guga iyo xilliga xagaaga. Xilliga dayrta iyo jiilaalka, curonia waa in ay ku sugan tahay nasasho, nasasho, sidaas darteed gooyn ku raaxaysan kartaa siin xididdada. Si kastaba ha ahaatee, geedka sii kordhaya ee hawada u furan (ma gudaha), waxaa badanaa waa in la gooyaa dayrta, ka hor inta qodayaa digriiga.
Gowracin begonias gooyaa ee biyaha. Goynta looma baahna in si deg deg ah loo beero dhulka, waxaad ku ridi kartaa galaas biyo ah sida tiknoolajiyada kor ku xusan, cutubka "rooting of caleemaha curonia ee biyaha." Maskaxda ku hay in rootingka biyaha ayaa qaadan doona waqti dheermarka loo barbardhigo dhulka, sidoo kale, xididada leh habkan soo saariddu waxay noqon doontaa mid khafiif ah oo daciif ah.
Sida loo aasaaso curonia? Sidaas darteed, gooyn ayaa kufilan laba siyaabood - dhulka iyo biyaha. Habka ugu horreeya waa mid deg deg ah oo la isku halleyn karo, laakiin kan labaad waa sahlan yahay waana cad yahay.
Dareeris ah ee begonias leh qaybo ka mid ah tuber ah
Guga, sprouts cusub u muuqda digriiga, iyo haddii aysan weli ku dhicin caleemaha buuxa, tuber waxaa si ammaan ah u qaybsan qaybo badan. Dhimashadu waxay ku rusheeyeen dhuxul la jajabiyey si looga hortago digriiga qiiqa. Nidaamkan dhalmada waa fiicantahay, maxaa yeelay waxay dib u soo noolaanaysaa geedka, waxana uu si fiican u uumay. "Dhirta cusub" dhirta yaryar waxaa lagu beeray dheriyo carrada waxayna si weyn u waraabin jireen.
Sidee loo dhigaa begonia?
Waxaad ka saari kartaa geedo ka soo baxa caleenta la jeexay, waxaad xididdada asaasiga ah ku dari kartaa biyaha ama dhulka, waxaad ku xidhan kartaa caleen ah begonia biyaha, ama waxaad ka kori kartaa abuurka. Haddii aad tahay mulkiilaha ubax kala duwan oo tuber ah, waad ku fidi kartaa, u qaybinta tuber qaybo badan oo leh sprouts.
Waxa ugu weyn ee - si loo xaqiijiyo ubaxa daryeelka saxda ah inta lagu jiro iyo ka dibba. Si sidan loo sameeyo, raac talooyin dhowr ah:
Ku soo celinta addoonsiga meel bannaan, laakiin ka fogaanta iftiinka qorraxda;
Biyaha si joogto ah, laakiin ma jiro kiis kiniin ah;
Eeg heerkulka qolka: waa inuusan ka yarayn 20 digrii;
bacrimiya ubaxa guga hore iyo dhammaan xagaaga.
Raac tilmaamahan taranka ee begonias oo ay kuugu farxi doonaan. caleemaha cusub oo caafimaad leh iyo ubaxyo jilicsan. Kaalay ubaxaaga waa farxad aad!
Marka xigta waxaad arki doontaa sawir ka mid ah Begonias taranta:
Hoos waxaa ku qoran liiska qodobbada laga yaabo inay xiiseynayaan.
Bilowgii laga bilaabo
Dhammaan murugada guriga daryeelka ee Tuberous Begonia
Wintering of begonia ee tuberiyo
Dhammaan wixii ku saabsan Begonia soo degitaanka - laga bilaabo A ilaa Z
Cudurada iyo cayayaanka Begonias
Beerta Begonia Daryeelka